क्लिन फिड : नेपाली च्यानलमा बज्ने विदेशी डबिङ विज्ञापन कहिले रोकिन्छ ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
सस्तो मूल्यमा शक्तिशाली ब्याट्री सहित दुई नयाँ स्मार्टफोन
आईतवार, कार्तिक ९, २०७७ १०:३२
६,००० एमएएच ब्याट्री भएको पोको एमथ्री सार्वजनिक, यस्तो
ल्यापटप किन्दा ख्याल राख्नुपर्ने ५ कुरा
मंगलबारदेखि युएईमा पब्जी गेमको ग्लोबल च्याम्पियनशिप, नेपालका दुई
फेसबुक म्यासेन्जरमा देखियो समस्या, तपाईंले गरेको कुराकानी अरुले
यस्ता छन् २०२० का झुर पासवर्ड, कतै तपाईंको
मोबाइलमै फोटो इडिट गर्न यी हुन् उत्कृष्ट ८
ब्लुटुथ खुल्लै छोड्दा के हुन्छ ?
फोटोमा ब्याकग्राउन्ड हटाउने वा परिवर्तन गर्ने छिटो र
गुगल सर्चमा झुक्किएर पनि नखोज्नुहोस् यस्ता कुरा
अब हाम्रो पात्रो पनि ईकमर्समा, विदेशबाट गिफ्ट पठाउन
९५ रुपैयाँमै टेलिकमको भ्वाइससहित ८ जीबी डेटा प्याक,
१६ मुलुकलाई साइबर थ्रेटसँग लड्न सघाउँदै २४ वर्षीय
क्लिन फिड : नेपाली च्यानलमा बज्ने विदेशी डबिङ विज्ञापन कहिले रोकिन्छ ?
काठमाडौं । लामो समयदेखिको चर्चापछि शनिबार नेपाली विज्ञापन बजारको लागि एक महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो अर्थात् क्लिन फिड लागू भयाे । योसँगै नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित भएका छन् ।
यसको अर्थ अब नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन हेर्नुपर्ने छैन । विज्ञापन ऐन–२०७६ को प्रावधानअनुसार नेपालमा क्लिन फिड नीति लागू गरिएको हो । गत वर्षको कात्तिकमा संसदबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको दफा ६ मा एक वर्षभित्र क्लिन फिड लागू गर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
उक्त प्रावधानकै आधारमा शनिबारदेखि क्लिन फिड लागू गरिएको छ । जसका कारण कतिपय विदेशी च्यानलको नेपालमा प्रसारण नै रोकिएको छ । जसमा स्टारका सम्पुर्ण च्यानल बन्द भएका छन् भने बीबीसी, सीएनएन जस्ता च्यानल पनि बन्द भएका छन् ।
यो थियो विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बज्न नपाउने कुरा । विज्ञापन ऐनले त्योभन्दा पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । त्यो हो नेपामा विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरेर बजाउन पाइने छैन ।
तर, आज (आइतबार) पनि विदेशी डविङ विज्ञापन बजिरहेका छन् । भारतीय कलाकारले खेलेको विज्ञापनमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेर धेरैजसो टेलिभिजनमा विज्ञान बजिरहेको छ ।
कानूनले त्यसलाई प्रतिबन्ध गरेर नेपाली कलाकार र नेपालमै बनेको विज्ञापन बज्नुपर्छ भन्ने कानूनले तोकेको छ र त्यहीअनुसार लागू गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ बताउँछन् ।
‘विज्ञापन ऐनले विदेशी डबिङलाई मान्यता दिँदैन,’ मन्त्री गुरुङ भन्छन, ‘यसको अनुगमन हुन्छ । अनुगमन गर्दा त्यस्ता विज्ञापन बजेको पाइएमा कारबाही गरिन्छ ।’
यसको अर्थ यो भयो कि विदेशी डबिङ विज्ञापन पनि यहाँ बज्ने छैनन् । अनि किन बजिरहेका छन त ? विज्ञापन संघका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ भन्छन, ‘यस्ता विज्ञापन बजाउन नपाउने नै हो । सरकाले यो विषयमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।’
तर, अहिले कोभिडको कारण कतिपय अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डको विज्ञापन निमार्ण हुन सकेको छैन । त्यसैले गर्दा पनि अहिले विज्ञापन बजिरहेका हुन सक्छन् । केही समयपछि यस्ता समस्या सबै समाधान हुने विश्वास उनले गरे ।
दूरसञ्चार संस्थानको पैसा जोगाउँदा उल्टै तक्मा खोसियो
श्री ५ को सरकारको २०४२ आसार १२ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (हालको नेपाल टेलिकम)
यसरी तुहियो गाउँ-गाउँमा साइबर क्याफे पुर्‍याउने सरकारी योजना
काठमाडौं । अहिले त सबैको हातमा मोबाइल फोन छ । धेरैको पहुँचमा ल्यापटप कम्प्युटर छन्
क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्नेको संख्या बढ्यो, एक महिनामै करिब १ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । क्यूआर कोड मार्फत विद्युतीय भुक्तानी गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ ।
इन्टरनेट सम्बन्धी गुनासो निःशुल्क टिपाउन यस्ता छन् आईएसपीका टोल फ्री नम्बर
काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही समयअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा
मोबाइलमै फोटो इडिट गर्न यी हुन् उत्कृष्ट ८ एप
फोटोमा ब्याकग्राउन्ड हटाउने वा परिवर्तन गर्ने छिटो र सजिलो तरिका
यस्ता छन् २०२० का झुर पासवर्ड, कतै तपाईंको त परेन ?
यी हुन् नेपालका ५ ठूला इन्टरनेट कम्पनी, कसको बजार कति ?
नास्टका पूर्वउपकुलपति केदारलाल श्रेष्ठको निधन
इन्फीको किताब कार्निभल अभियान पुस १६ देखि
मिडरेन्जका यी ग्यालेक्सी फोनमा पनि सामसङको निःशुल्क टिभी सेवा